December 2019 – Myanmar Chat Online
မကှာသေးခငကြမှ ထိပမြှှားလကထြပခြဲ့တဲ့ ခစွစြနိုးဦးနဲ့ ဖိုးသား Guardians ရဲ့လကထြပပြှဲဟာခစွစြရာလေးပါပဲ။ အဲ့လိုပဲ ခစွစြနိုးဦးရဲ့အမွိုးသားဖှဈသူ အဆိုတောြ ဖိုးသား ( Guardians ) ဟာ သူ့ကားတှကေို Online ပေါတြငခြဲ့ပှီးနောကြ အငမြတနမြှ ဝဖနေမြှုမှင့တြကခြဲ့ပါတယြ။ တဈခွို့က “ကိုယျတှကေတော့ မုဒိတာပှားပါတယျ ရှာနိုငျတုနျး ရှာခဲ့တာဆိုတော့ဗြာ။ တဈခုပဲ ဒီလောကျ အကုနျ သိကွမယျ့ခတျေမှာ တခွား လူကွီး သားသမီးတှဆေို အငွိမျနကွေပမေယျ့ မနနေိုငျ မထိုငျနိုငျ ထီ ၁၆ ခါ ပေါကျထားသလို ဖငျထထယားတဲ့ ကောငျတှေ ကွောငျ့ ကနြျတဲ့ လူတှပေါ အနအေထိုငျ ကွုံ့ရတယျကှာ။ သူခိုးရှှရေတပွပွမလုပျသငျ့ဘူး ဖိုးလပွညျ့တောငျ အဲလိုမနဘေူး ပွောပွတာပါ။” ဆိုပှီးရေးသားထားပါတယြ တဈခွို့ကကတွော့ ဒီကိဈစအတှကြ ဝဖနေတြဲ့သူရှိသလို မနာလိုမဖှဈနဲ့ဆိုပှီးတော့ ပှောတဲ့သူလညြးရှိပါတယြ […]
ဆရာဝန်ရဲ့ Deadbody က ကား နောက်နောက်ခန်း ရောက်နေတယ်။ ကားရဲ့ Gear က R မှာ ရောက်နေတယ်။ ပစ္စည်း တွေတော့ မပျောက်ဘူး။ ကားက စက်ဖွင့်တဲ့ အနေအထားမျိုး မဟုတ်ဘူး သော့ က ၂ ဆင့်ပဲ လှည့်ရသေးတယ်။ အဲနား မရောက်ခင် ကားရဲ့ Speed က ကီလို 20 or 30 လောက်ပဲ ရှိတယ် ( Bo win Live ) Bobowin Emergency Rescue Services(EMR) Live မှာ Comment ဝိုင်းပေးတဲ့ သူများကတော့ နောက်တစ်ခုက အဲည က မြစ်ဆိပ် မယ် အသုဘ […]
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့မှာ ရက် ၂၀ လောက် ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ဒေါက်တာ အေးဇော်ထွန်းတို့သားအဖ ၂ ယောက် စီးသွားတဲ့ကားကို ရေငုပ်ရှာဖွေရာကနေ ဒီကနေ့မနက် မြစ်ထဲမှာ ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ညောင်ပင်ဆိပ်ချောင်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကားနဲ့ သားအဖများ
မော်လမြိုင်က ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဆရာ၀န်သားအဖကားလို့ ယူဆရတဲ့ ကားတစ်စီးကို ညောင်ပင်ဆိပ်ချောင်းမှာ တွေ့ရှိထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုတော့ အတည်ပြုဖို့အတွက် အခုလက်ရှိ လုပ်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုအတည်ပြုမလည်းဆိုတာကိုတော့ စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။ ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ကျပါအုံး
မော်လမြိုင်မြို့ထဲမှာ ကားရောလူပါဘယ်လိုပျောက်သွားလဲ ? ( ၁၉ ) ရက်ကြာပြီ
မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ဇေယျာသီရိနယ်မြေ၊ ဗြဟ္မစိုရ်ဆေးခန်းမှ ဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်းဟာ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ ဆေးခန်းပိတ်ချိန်မှာ သူရဲ့ မိတ်ဆွေ ၃ ဦးနဲ့တွေ့ဖို့သူရဲ့သားငယ်ကိုခေါ်ပြီး နေအိမ်ကနေ Toyota Wish 3L-9150 ခဲရောင်ကားနဲ့ ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်းသည် ဖက်ခင်းလမ်းရှိ ဧရာဝတီစားသောက်ဆိုင်မှာ ၎င်းမိတ်ဆွေ ၃ ဦးနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်း တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ၎င်းမိတ်ဆွေ ၃ ဦးထဲတွင် ၂ ဦးမှာ ရန်ကုန်မှ လာရောက်တာဖြစ်ပြီး မြိုင်သာယာရှိ တိမ်ပြာတည်းခိုခန်းမှာ တည်းခိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တစ်ဦးကတော့ မော်လမြိုင်က ဖြစ်ပါတယ်။ ည ၉ နာရီခွဲဝန်းကျင်၌ ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ ဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်းရဲ့ ဇနီးက ဖုန်းဆက်စကားပြောခဲ့ရာမှာ အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာအေးဇော်ထွန်းသည် ၎င်းမိတ်ဆွေများနဲ့စကားပြောပြီး ည ၁၀ နာရီခွဲမှာ […]
ညီမလေးတို့ရေ ရည်းစားထားချင်နေပြီလားကိုယ်သဘောကျနေတဲ့ဘဲလေးကို ။ ၁) ဟိုဟာလုပ်ရင်ကောင်းမလား ဒီဟာလုပ်ရင်ကောင်းမလား မမေးနဲ့လုပ်ချင်တာလုပ်ပါ သူ့ကိုနေရာတကာ ဝင်ပါတတ်အောင် အကျင့်မလုပ်ပါနုဲ့။ ၂) နေ့တိုင်းတွေ့ချင်မနေနဲ့ကိုယ့်သွားစရာရှိတာသွား တပတ်တရက် နှစ်ရက် တွေ့ဖို့ချိန်း ချိန်းပြီးရင်တော့ မပျက်စေနဲ့။ ၃) အားကစား ပြိုင်ပွဲတွေ ကိုယ်တိုင်ပြိုင် သူ့လည်း ပြိုင်ခိုင်း ဥပမာ စကိတ်စီးတာတို့တင်းနစ်ရိုက်တာတို့။ ၄) လုံးဝမကြောက်တတ်ဖူး စိတ်တော့ပူတယ် ဒါပေမယ့် လုပ်တာပဲ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ လုပ်ပြနိုင်ရမယ် ကိုယ့် ကိုကိုယ်အားကိုးကြောင်းပြပါ။ ၅) သူ့ရဲ့ မိဘတွေနဲ့ခင်အောင်ပေါင်း အချိန်ပေး သူတို့ပြောတာ နားထောင် ပေးပါ။ ၆) မိသားစု အလုပ် ကျောင်း နဲ့စတာအားလုံးကိုကျက်သရေရှိတဲ့ စကားကိုပဲပြောပါ တခါတလေမှ ရင်ဖွင့်ပါ။ ၇) ချစ်သူကို အရှိအရှိအတိုင်းပဲ လက်ခံထားပါ အထင်လည်း မသေးပါနုဲ့အထင်လည်း […]
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ သိစေအပ်ပါသည် ရှေးဟောင်းသုတေသန အမြင် မရှိကြတော့ဘူးလား? တမုတ်ရွှေကူမှာ ဗုဒ္ဓဝင်ပြခန်းဆောက်မလို့ တဲ့၊ ကျောက်ဆည်မြို့ “တမုတ် ရွှေကူကြီး “ဘုရားသည် ပျူခေတ် ၊ပုဂံခေတ်၊ပင်းယခေတ် ခေတ်အဆက် ဆက်က ရှေးဟောင်းလက်ရာများတည်ရှိခဲ့ခြင်း။ရှားပါးသော “နှစ်ထပ်ဘုရား” တဆူ ဖြစ်ခြင်း။ ပို၍ ရှားပါးသော ” သုံးထပ်ဆင်းထု”များရှိနေခြင်း။အလွန်လက်ရာကောင်းသော ပန်းတော့ အင်္ဂတေပန်းလက်ရာများ အကောင်းပကတိ နီးပါးကျန်ရှိနေခြင်း။ ခေတ်အဆက်ဆက်၏ အုတ်ရိုးဟောင်းများ၊ မူလကြမ်းပြင်များကို စံနစ်တကျ တူးဖော် ထိန်းသိမ်းပြသထားခြင်း။ တဆူတည်းသော ပုဂံခေတ် ပန်းတော့ လက်ရာ ၅၅၀ ဇာတ်သရုပ်ဖော် ပန်းတော့ အင်္ဂတေလက်ရာ များတည်ရှိနေခြင်း။ ရှားပါးသော “ပုဂံခေတ်အင်္ဂတေစာ”များတွေ့ရှိရခြင်း။ စသော မည်သည့် နေရာတွင်မျှ မတွေနှိုင်ရသည့် ပုဂံ ခေတ် ယဉ်ကျေးမှု့လက်ရာများ တစုတဝေးတည်းတည် ရှိနေသည့် “အတုမရှိ” […]
အမေရိကားမှာ ကျောင်းသွားတက်ခဲ့တဲ့သား ကျောင်းပြီးတော့ ကျွန်မအတွက် စူစန်လို့ခေါ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ချွေးမတစ်ယောက် ရှာပေးခဲ့တယ်။ ဒီကနေ့မှာ မြေးလေးထော်ဘီတောင် (၃)နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီနှစ်နွေရာသီမှာ သားက ကျွန်မကို အမေရိကားအလည်လာဖို့ ခေါ်ခဲ့တယ်။အမေရိကားမှာနေခဲ့တဲ့ (၃)လအတွင်း ချွေးမစူစန်ရဲ့ သားသမီးကို ဆုံးမသွန်သင်နည်းတွေက ကျွန်မကို အတွေးအမြင် ပိုကျယ်စေခဲ့ပါတယ်။ (၁) မစားရင် အဆာခံပါ မနက်တိုင်း ထော်ဘီအိပ်ရာထလာတာနဲ့ စူစန်က မနက်စာကို စားပွဲပေါ်တင်ပေးခဲ့ပြီး သူ့အလုပ်ကို သူဆက်လုပ်နေခဲ့တယ်။ထော်ဘီဟာ ကိုယ်တိုင် ကုလားထိုင်ပေါ်တက်၊ ကိုယ်တိုင်နွားနို့သောက်၊ ကိုယ်တိုင်ပေါင်မုန့်တွေ စားနေခဲ့တယ်။ စားပြီးတဲ့နောက် ကိုယ့်အခန်းထဲဝင်ပြီး အဝတ်ဘီရိုထဲကနေ အဝတ်အစား၊ ဖိနပ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ဝတ်ဆင်ခဲ့တယ်။(၃)နှစ်ပဲရှိတဲ့ ထော်ဘီလေးဟာ ခြေအိတ်ရဲ့အရှေ့အနောက်၊ ဘယ်ဖိနပ်၊ ညာဖိနပ်ကို ခွဲတတ်သေးသူ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါက ထော်ဘီဟာ ဘောင်းဘီကို ရှေ့နဲ့နောက် ပြောင်းပြန်ဝတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကို ကျွန်မက […]
စိန်လင်း ( Aroma )လို့ လူသိများလာတာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်လောက်ကတည်းကပါ။ လူတော်တော်များများက၊ ပုရိတ်သတ်တော်တော်များများက သူ့ကို အဆိုတော်ဆိုပြီး သိထားကျပါတယ်။ သူက အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင် ဆိုထားတဲ့ MTV တွေမှာ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုပါ ပိုင်နိုင်စွာနဲ့ ပီပီပြင်ပြင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို Uncel ကတော့ No ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ လူသိပိုများလာခဲ့တာပါ။ အခု ဆိုရင်လည်း သူက Myanmar International Fashion Week 2019 အတွက် အကောင်းဆုံးသော သီချင်းတွေနဲ့ တင်ဆက်ဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိတ်သတ်တွေအားလုံးလည်း သူ့သီချင်းနဲ့ မြှူးနေကျတာကို သူတင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတွေရမှာပါ။ ဒီမှာလည်း ( ၇ ) နှစ်တိုင်တိုင် အောင်မြင်စွာနဲ့ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ […]
Apple ကနေ ၆လစာအခမဲ့ Apple Music ကိုရယူနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ သူကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူလေးပါ။ အရင်ဦးဆုံး Music Finder Apps တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Shazam ဆိုတဲ့ Apps လေးကို Install ပြုလုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ အဲ့ဒါဆိုရင် Apple ကနေ ၆ လစာ ယူမလာားဆိုပြီးမေးရင် ယူလိုက်ရုံပါပဲနော်။ ကဲဘယ်လောက်တောင်လွယ်ကူလိုက်လည်း အခုပဲ စမ်းကြည့်လိုက်တော့နော်